Allgedo.com » 2012 » September » 25
Home » Archive Daily September 25th, 2012
Danjire Maxamed Cali America “Keya raali galin bay ka bixisay dadkii Soomaaliyeed ee ay Janay Cabdalle ku laysay” (Dhageyso wareysi)
Kaddib markii uu mid ka mid ah ciidanka Kenya ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose September 23, 2012 ku laayay dad shacab Soomaaliyeed oo reer baadiye ah ayaa waxaa arrintaas ka damqaday danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, kaasoo warqad ashtako ah u qoray wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Kenya, kaddibna sida uu sheegay si fool-ka-fool ah u qaabilay qaar ka mid ah mas’uuliyiinta...
Yaa ka danbeeyay been abuurki maanta lagu faafiyay magaalada Muqdisho ee sheegayay in Ra’iisul wasaare loo doortay Farmaajo, maxayse ahayd ujeedka laga lahaa?
Sida aad la wada socotaan waxaa maanta magaalada Muqdisho iyo saxaafada Soomaalida lagu faafiyay war been abuur ah, warkaa oo lagu sheegay in madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in uu Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya uu noqdo Dr. Maxamed C/llaahi Farmaajo. Warkaan ayaa waxaa magaalada soo galiyay soona abaabulay 3 qof oo ay laba rag yihiin midina ay dumar tahay. Haddaba...
Qunsulka Soomaaliya ee Cadan oo kulan la qaatay dhiggiisa dalka Masar oo balanqaaday in Xukuumadda Qaahira ay taageereyso dowladda cusub ee Soomaaliya.
Qunsulka Guud ee Soomaaliya ee Magaalada Cadan Axmed Cabdi Xasan, oo loo yaqaan Axmed Suudaan ayaa kulan isbarasho ah kula yeeshay maanta Magaalada Cadan dhiggiisa dalka Masar u fadhiya magaaladaasi, waxa ayna ka wada sheekeysteen xaaladda labada dal ee Soomaaliya iyo Masar. Qunsul Axmed Cabdi Xasan , waxa uu sheegay in kulanka uu ahaa isbarasho dhexmaray isaga iyo Qunsulka Masar ee Magaalada Cadan...
WAR DEG-DEG AH: Cabdiraxmaan Faroole oo dhiigii ku kacay kaddib markii uu maqlay wararkii sheegaayay in Farmaajo uu Ra’iisul wasaare yahay.
Warar goor dhaw naga soo gaaray magaalada Garoowe ee xarunta gobalka Nugaal ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulkaasi uu ku kacay dhiiga kaddib markii uu maqlay warar aan xaqiiq ahayn misane sheegaayay in Farmaajo uu noqday ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Faroole waxaa la sheegay in deg-deg loogu wacay dhaqtarkii u gaarka ahaa, waxaana haatan xaaladiisa ay tahay mid degan marka...
Xildhibaanada ka soo jeeda Gobolada Jubooyinka oo cambaareeyay falkii ay ciidamada Kenya ku xasuuqeen dad xoolo dhaqato ahaa.
Inta badan Xildhibaanada Dowlada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Gobolada Jubooyinka ayaa maanta shir jaraa’id oo ay ku qabteen Magaalada Muqdisho waxaa ay kaga hadleen xasuuqii dhawaan ciidamada Kenya ay ka gaysteen deegaanka Janaay Cabdale ee gobolka Jubada hoose. Xildhibaanadaani ayaa si kulul u cambaareeyay falkaasi wuxuushnimada ah oo ay kenyaatigu ku kaceen markii si ula kac ah u laayeen...
Qaar ka mid ah Saraakiishii hore ee Ciidamada Qalabk sida ee ku sugan Gobolka Gedo oo Kenya ku eedeeyay dilal dad Xoola dhaqato ah.
Qaar ka mid ah Saraakiishii hore ee Ciidamada Qalabka Sida ee soomaaliyeed kuna sugan degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa markii ugu horeysay waxaa ay ka hadleen Falkii dilka ahaa ee Doraad lagula kacay dad Xoolo dhaqato ah oo deganaa degaanka Janaay Cabdale oo ka tirsan Gobolka J/Hoose, iyadoo falkaasi dilka ahna oo ay geysteen Ciidamada Kenya ayaa waxaa ku geeriyoodey ilaa 6 ruux, halka ilaa...
DEG DEG: Muqdisho oo rasaas xoogan ka socota iyo Farmaajo oo la sheegaayo in Ra’iisul wasaare loo doortay.
Muqdisho, Somalia (AOL) – Magaalada Muqdisho waxaa goor dhaw ka bilaabatay rasaas xoogan oo dabaal deg ah iyadoona la sheegaayo in Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo loo magacaabay xilka Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya. In kastoo weli wareegtada lagu magacaabay Farmaajo aanay warbnaahinta dowladda laga baahin ayaa hadana shacabka oo dhan waxay isugu soo baxeen wadooyinka waxaana qaar ka...